Iko kukanganisa alarm uye mhinduro yedhiziri jenareta inodzora pani
Power backup dizeli genset haigone kutanga nekumira otomatiki Kukundikana Kuongorora 1.Diesel injini yakavhara pasi relay hapana chiito. 2.diesel injini solenoid yakaputsika. Troubleshooting 〈1〉 Pimha iyo Dizeli injini yekudzima relay ine yakawanda-mita, iyo yakajairika kushanda voltage ndeye 25.5 V, kana ikasvitswa hapana acti ...
Kukundikana kuongorora uye mhinduro kana dhiziri genset injini chiutsi chiutsi hazvina kujairika
Kwakajairika mashandiro edhiziri injini ine mutoro, chiutsi chiutsi ruvara rwakareruka grey kazhinji, kana mutoro wacho uri unorema zvishoma, ungave kune wakasviba grey. Apa chiutsi cheutsi chiutsi chisina kujairika zvinoreva utsi hwehuswa hutema kana utsi hweutsi uchichena kana utsi hweutsi hwebhuruu. 1, Hutsi hutema hunoratidza kupisa ...
Kukundikana kuongorora uye mhinduro yeinjini yedhiziri jenareta seti haigone kutanga
Pane zvikonzero zvakasiyana siyana hazvigone kutanga injini yedhiziri genset. Kunyanya mumatatu mana anotevera: 1.start system Kukundikana Kuongorora A. Kutanga bhatiri voltage yakaderera, iro chairo kugona hakuna kukwana (kunoratidza iyo voltage seyechokwadi magetsi) B.Start bhatiri tambo uye mota wiring kukanganisa CS ..
Chii chiri chikonzero chehutsi mune dhiziri jenareta seti?
Diesel jenareta seti inogona kuburitsa hutsi panguva yekushanda. Mavara akasiyana eutsi anomiririra zvikanganiso zvakasiyana. Kana hutsi hwejenizere seti jenareta isingaitwe nayo munguva, zvinogona kukonzera kukundikana kwedhiziri jenareta set kana kunyangwe kutadza kutanga. Heano mamwe eanoputa mamiriro ...
Kugadzirira kwekuiswa kwechikwata
1.Unit inobata Mukubata kunofanirwa kutarisisa tambo yekusimudza inofanirwa kusungirwa munzvimbo yakakodzera, yakaturikwa zvishoma. Kana iyo unit ichiendeswa kunzvimbo, inofanirwa kuiswa mudura sezvinobvira. Kana pasina imba yekuchengetera inofanirwa kuchengetwa mumhepo, t ...
Kambani yedu yakahwina iyo yekushandisa modhi patent chitupa cheiyo Ultra - yakanyarara yakamira jenareta seti
ne admin pane 16-03-09
Yedu kambani zvakamisikidza yakawana iyo yekushandisa modhi patent chitupa cheyakanyanya-yakanyarara yakamira jenareta yakatarwa munaKurume 9, 2016.Iyo yakanyarara yakamira jenareta seta gadziridza zvemukati chimiro chejenareta yakatarwa kuti iyo unit igare zvishoma nzvimbo. Iyo yakakodzera smal ...
Kambani yedu yakapihwa iyo yekushandisa modhi patent chitupa che Ultra-yakanyarara dhiziri jenareta seti
ne admin pane 15-06-17
Kambani yedu zviri pamutemo yakawana iyo yekushandisa modhi patent chitupa cheyeti-yakanyarara dhiziri jenareta yakagadzwa muna Chikumi 17th, 2015. Iyi Ultra-yakanyarara dhiziri genset ine compact yemukati dhizaini uye mushandisi-inoshamwaridzika dhizaini, iri nyore kune vashandisi kugadzirisa uye kutsiva kupfeka. ..
Iko kukanganisa alarm uye mhinduro yedhiziri ge ...